Ime ụlọ Hagadal n'abalị | Nleta Hultsfred
hem » 🛏️ Ụlọ » 🏡 Ụlọ » Ime ụlọ Hagadal n'abali
Lọ ehihie na-enwe ohere maka mmadụ anọ.
Obere ụlọ ndị dị mita 10 square nke zuru oke maka ịnọ abalị. Clọ ndị a na-ebi n’ụlọ a dị n’ebe a gbara ogige n’azụ ebe ahụ. Otu n'ime ụlọ ndị ahụ bụ ụlọ ọrụ a na-ahụkarị nke nwere friji, ngwa ndakwa nri na kọfị. WC na ịsa ahụ dị na akụrụngwa dị n'akụkụ ụlọ ndị ahụ.
Akwụkwọ obere ụlọ 1
Akwụkwọ obere ụlọ 3
Akwụkwọ obere ụlọ 5
Akwụkwọ obere ụlọ 6
SEK 400 / ụbọchị
Usoro nke 1, 577 30 Ezenwankwo, Sverige
Nyocha 3 na Google
4/5 2 afọ gara aga
Andlọ ọma mara mma. Ọ dị ntakịrị zoo n'azụ ụlọ ọrụ egwuregwu ma ọ nwere ike isi ike ịchọta. Butlọ ọrụ dị mfe ma mara mma na ezigbo bat na mposi na ebe a na-egwu egwuregwu. Ọ dị mma ịnwe ike iji ọdọ mmiri mee ego.